ONLF oo ku Dhawaaqday Xabad Joojin Dhinacooda ah, Waftina u Diraysa Addis Ababa. – Rasaasa News
Nairobi, Aug 13, 2018 – Qoraal ka soo baxay Jabhada ONLF, ayey ku sheegtay in ay xabadd joojin ku dhawaaqday, waliba ay wafti u dirayso Addis Abab.
Qoraalka waxaa lagu sheegay in xabad joojinta labo aromood loo sameeyey; 1) In Raysal wasaaraha Itoobiya ka saaray liiska arggagixisada nabadna ugu baaqay, 2) iyo in duurfta dagaanka ka jirta darteed ay xabada u joojiyeen.
Waxaa kale oo Jabhada ONLF sheegtay in ay wadahadal la gali doonto dawlada dhexe eee Itoobiya.
Waxaan qarsoonayn in Raysalwasaaraha Itoobiya uu nabad ugu baaqay dhamaan ururada mucaaradka ah iyo waliba shakhsiyaadka dibad joogta ah ee siyaaad kaga horjeeday xukuumadii hore.
Saaxiibka ugu muhiimsanaa ee ONLF lahayd labaatankii sano ee tagay, waxay ahayd dawlada Eriteriya oo haatan noqotay saaxiibka ugu dhaw ee Itoobiya.
ONLF, dhawaan ayey shirk muhiim ah ku qabsatay Eriteriya. Raysal wasaaraha Itoobiyan ayaa maalo ka dib booqday Eriteriya, lama oga in ay kulmeen ONLF iyo in kale. Waxaa kale oo aan ilaa iyo hada la ogayn doorka ay dawlada Eriteriya ku leedahayd wadahadal uu hore ugu baaqay Abiy Ahmed, in kasta oo markii dambe uusan sii wadin sida la sheegay.
Madaxwaynihii la eryay ee dagaanka Soomaalida iyo saraakiil Tigray ah ayaa shirku qaatay Nairobi, February, 2018. Shirkaas waa la isku afgartay sida la sheegay laakiin lama saxiixin wixii la isku af gartay.
ONLF, kuma farxin tagida Cabdi Maxamud Cumar, waayo wuxuu ahaa xog ogaal waxayna doonayeen in uu qayb ka noqdo wadahadalka Itoobiya iyo ONLF, maadaama uu qayb ka ahaa wadahadalkii Nairobi. Abiy Ahmed, ma doonayn in qof xog ogaal ah oo waliba awood Itoobiya dhaxdeeda ku leh in uu ka qayb noqdo wadahadalka.
Waxaa hore u sii joogay magaalada Addis Ababa, xubno ONLF, lamana maqal kulan ay la qaateen dawlada Itoobiya. Ilaa iyo hadana ma cada nooca wadahadal ee ay wada yeelan doonaan ONLF iyo Itoobiya.
Itoobiya waxay dhan u leedahay munaafaqda iyo miidaan qaris, wayna adagtahay sida ay u fuliso balanqaadyada ay gasho.